Njaka Ramanandafy, auteur sur FJKM Québec - Canada - Page 2 sur 57
21 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 48 Mofonaina Ny fahatahorana an’i Jehovah OHABOLANA 15 : 29-3315:29 Jehovah dia lavitra ny ratsy fanahy; fa ny fivavaky ny marina no henoiny. 15:30 Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo; ary ny filazan-tsoa mamelombelona ny taolana. 15:31 Ny sofina izay mihaino anatra mahavelona dia miara-mitoetra amin’ny hendry. 15:32 Izay manda anatra dia manary tena; […]
20 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 42 Mofonaina Matahora an’Andriamanitra DEOTERONOMIA 10 : 12-2210:12 Ary ankehitriny, ry Israely o, inona moa no ilain’i Jehovah Andriamanitrao aminao, afa-tsy ny hatahotra an’i Jehovah Andriamanitrao sy ny handeha amin’ny lalany rehetra ary ny ho tia Azy sy hanompo an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, 10:13 hitandrina ny didin’i Jehovah […]
17 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 56 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra EKSODOSY 18 : 17-2318:17 Ary hoy ny rafozan’i Mosesy taminy: Tsy tsara izao zavatra ataonao izao. 18:18 Samy ho reraka mihitsy, na ianao na izao olona miaraka aminao izao; fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao, ka tsy ho zakanao irery ny hanao izao. 18:19 Ary ankehitriny, dia […]
16 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 39 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra TITOSY 1 : 5-91:5 Izao no namelako anao tany Kreta, dia ny handaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao loholona amin’ny isan-tanana, araka ny nandidiako anao; 1:6 raha misy tsy manan-tsiny, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba ampangaina ho mpanaram-po amin’ny ratsy na ho […]
15 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 41 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra TITOSY 1 : 5-91:5 Izao no namelako anao tany Kreta, dia ny handaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao loholona amin’ny isan-tanana, araka ny nandidiako anao; 1:6 raha misy tsy manan-tsiny, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba ampangaina ho mpanaram-po amin’ny ratsy na ho […]
11 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 44 Mofonaina Miasà amin’ny fatahorana an’Andriamanitra JAKOBA 5 : 16-205:16 Koa mifaneke heloka ianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. 5:17 Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny ranonorana; dia tsy nilatsaka tamin’ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. […]
10 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 47 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra FILIPIANA 2 : 12-182:12 Koa amin’izany, ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa amin’ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. 2:13 Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana […]
9 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 42 Mofonaina Mofonaina MATIO 21 : 23-3121:23 Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan’ ny tempoly i Jesosy ka nampianatra, dia nanatona Azy ny lohan’ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe: Fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome Anao izao fahefana izao? 21:24 Ary i Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izaho […]
03 Septambra 20
3 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 51 Mofonaina Hamaivanin’ny olona ny fatahorana an’Andriamanitra MPANJAKA VOALOHANY 17 : 24-2817:24 Ary hoy ravehivavy tamin’i Elia: Ankehitriny izao dia fantatro fa lehilahin’Andriamanitra tokoa ianao, ary marina ny tenin’i Jehovah aloaky ny vavanao. Rehefa lasa babo ny Zanak’Israely dia heverin’ny mpanjakan’ny Asyria fa mba hanovana sy hamafana tanteraka ny momba ny Zanak’Israely ,ny fivavahany, […]
02 Septambra 2020
1 septembre 2020 by Njaka Ramanandafy
Hits: 69 Mofonaina Tia miantehitra amin’ny vola aman-karena ny olona LIOKA 12 : 16-2112:16 Dia nanao fanoharana taminy Izy ka nanao hoe: Ny tanin’ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. 12:17 Ary izy nihevitra tao am-pony hoe: Ahoana no hataoko, fa tsy manana fitoerana hamoriako ny vokatro aho? 12:18 Ary hoy izy: Izao no hataoko: handrava […]